Iindlela eziHambisayo zeNtengiso Abathengisi abakwazi ukungahoyi | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2012 NgoLwesibini, nge-4 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Ixesha leholide lixesha elimangalisayo kuba, ngokoluvo lwam, phantse konke malunga nokuthengisa kunye nokunyuselwa. Iyabonakala ukuba unyaka wonke, abathengi banomdla kumgangatho wabathengisi, ubudlelwane, ukubuyisa imigaqo-nkqubo kunye nokuhambisa… kodwa konke kubonakala ngathi kuphuma ngefestile ngexesha leeholide. Intengiso ye-MDG ikuhlanganisile oku infographic kwezinye zeendlela abakholelwa ukuba abathengisi abanakuzihoya.
Unyaka ngamnye, iiholide zikhupha abathengi befuna izipho ezintle kunye neerandi ezilungileyo. Kude kudala ngaphambi kokuba abantu bafike kwiindawo ezinkulu, abathengisi banamehlo abo ekuboneni iindlela eziya kuthengwa zonyaka ezokumisela indlela yokuthengisa kwabo kwiholide. Ukubonelela aba bathengisi isipho sesikhokelo, intengiso ye-MDG yenze le mibhiyozo ilandelayo. Ibonisa indlela eyidijithali eqhuba ngayo ngendlela abantu baseMelika abathenga ngayo nabachitha ngayo eli xesha lonyaka.
Ukuthatha kwam… ungangcono unezinto ezintle kwaye ulungele ukuzithengisa kakhulu. Ngethemba, abantu baya kongeza ngokwaneleyo ezinye izinto kwinqwelo yabo yokuthenga ukuze ubuyele kumnyama!
tags: iindlela zeholidemdg intengiso
Indlela yokongeza iidilesi ze-imeyile kwi-LinkedIn